२५ दिन देखि फरार दुइ बिबाहित महिला , अमृता घिमिरेले सपना बस्नेतलाई फरार गराएको खुलासा , देख्नुहुने महानुभाबहरुमा सम्पर्क गरिदिन आग्रह ! – Khabar Patrika Np
२५ दिन देखि फरार दुइ बिबाहित महिला , अमृता घिमिरेले सपना बस्नेतलाई फरार गराएको खुलासा , देख्नुहुने महानुभाबहरुमा सम्पर्क गरिदिन आग्रह !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख १४, २०७८ समय: १:४०:५५
समाजमा दिनानुदिन हरेक किसिमका घटनाहरु घटिरहेका हामीले सुन्न सक्छौ। धेरै जसो घटना त अझ श्रीमान र श्रीमती बिचको सम्बन्धलाई लियर बिभिन्न किसिमका हेडलाइन हरु बनिरहेका हामीले युटुब तथा बिभिन्न न्युज साइट मार्फत थाहा पाउन सकिन्छौ। हो यस्तै यस्तै घटना घटेको छ तनहु , मुलपानीमा पनि ।
बिगत २ बर्ष अघि बिबाह बन्धनमा बाधिएकि सपना घिमिरे २५ दिन देखि घर बाट फरार भयाकी छिन। उनको श्रीमान हरि बस्नेत रोजगारीकै शिलशिलामा भारत गयका थिय। १५ महिना पछि घर फर्किदा श्रीमती भने सम्पर्क बिहिन भयको ५ दिन बितिसकेको रहेछ।
भोलिपल्ट घरमै गइ पारिवारिक समस्याको समाधान गरौ भन्ने योजना बनाउदा उनीहरु भने घर नजाने तर प्रहरी कार्यालय जाने र आफ्नो समस्या उक्त कार्यालयमा बताउने सोच बनाए सपना र अमृताले। शनिबारको दिन भयको कारण केटा पक्षको अविभावक भने ढिला भयको थियो। केटि पक्ष को आमा र बुवा भने आइसकेकाले श्रीमती र श्रीमान बीच मिलापत्र गराई फेरी नया जिन्दगि सुरु गर्ने स्वीकार्दै श्रीमान र सह परिवार कार्यलय बाट बाहिर निस्किए।
उक्त न्युज सार्बजनिक भयो भने ज्यान मार्ने भन्दै धम्की पुर्ण फोनहरु आइरहेका छन। फोटोमा देखाइएका दुइ महिलालाई देख्नुहुने तथा भेट्नुहुने महानुभाबहरुले नजिकैको प्रहरी चौकी अथवा ९८०४१९५३०३ मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ।